उबुन्टु १..१० ब्रह्माण्डिक कट्टलफिस, स्थापना पछि गर्नुपर्ने कुराहरू | Ubunlog
अर्को लेखमा हामी केहीलाई हेर्नेछौं उबन्टु १..१० 'कोस्मिक कटलफिस' स्थापना गरेपछि हामीले गर्न सक्ने चीजहरू। स्पष्ट रूपमा, प्रत्येक प्रयोगकर्ताले उब्न्टुको नयाँ संस्करण स्थापना गरेपछि यी वा अन्य कामहरू गर्दछ। निम्नलिखित सुझावहरूले हामीलाई हाम्रो अधिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ नयाँ सुविधा उबुन्टुबाट
सुरु गर्नका लागि, यो भन्नु पर्दछ कि Ubuntu 18.10 यो उबुन्टु १.18.04.०XNUMX LTS रिलिज भन्दा धेरै फरक छैन। यदि तपाईंले पहिले नै यो प्रयोग गरिसक्नुभयो भने, तपाईं यसको उपस्थिति र यो कार्यान्वयन हुने तरिकासँग परिचित हुनुहुनेछ। मुख्य परिवर्तनहरू थोरै छन्थप रूपमा, मानक उबन्टु डेस्कटप रूपरेखा सुरक्षित गरिएको छ।
सबै यहाँ पढ्न सकिन्छ कि छैन तपाइँको उबन्टुले काम गर्न आवश्यक छ, त्यसैले यो सूची मात्र सूचक छ।
1 Ubuntu १..१० स्थापना गरेपछि केहि चीजहरू
1.1 अद्यावधिक स्थापना गर्नुहोस्
1.2 कोडेक्स सक्षम गर्नुहोस्
1.3 डकमा inoco क्लिक गर्दा अनुप्रयोग न्यूनतम सक्षम गर्नुहोस्
1.4 उबन्टुमा उपयोगी किबोर्ड शर्टकटहरू
1.5 लुकेका सेटिंग्स अनलक गर्नुहोस्
1.6 ब्याट्री प्रतिशत देखाउनुहोस्
1.7 रातको प्रकाश सेटिंग्स
1.8 जिनोम विस्तारहरू पाउनुहोस्
1.9 स्न्याप अनुप्रयोगहरूमा स्टक अप
1.10 ठाउँ खाली गर्न अप्ट क्यास खाली गर्नुहोस्
Ubuntu १..१० स्थापना गरेपछि केहि चीजहरू
अद्यावधिक स्थापना गर्नुहोस्
सधैं रोचक हुन्छ सुरक्षा अपडेटहरू र बग फिक्सहरू जाँच गर्नुहोस्। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको सफ्टवेयर अपडेट उपकरण सुरू गर्नु हो। अनुप्रयोगले स्वचालित रूपमा अपडेटहरूको लागि जाँच गर्दछ तपाईंले यसलाई खोल्नु भएपछि।
कोडेक्स सक्षम गर्नुहोस्
उबुन्टु प्रस्ताव गर्दछ तेस्रो-पार्टी कोडेक्स स्थापना गर्नुहोस् र स्थापनाको बखत अतिरिक्तहरू प्रतिबन्धित गर्नुहोस्, तर यो विकल्प प्राय: बेवास्ता गर्न सजिलो हुन्छ।
यदि तपाईंले यो छुटाउनु भएको छ भने, तपाईंले एमपी files फाईलहरू प्ले गर्नका लागि मिडिया कोडेक्स स्थापना गर्न आवश्यक पर्दछ, केही प्रकारका भिडियोहरू अनलाइन हेर्नुहोस्, वा उबुन्टुमा सुधारिएको ग्राफिक्स कार्ड समर्थनको फाइदा लिनुहोस्। गर्नुहोस् यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् तिनीहरूलाई स्थापना गर्न।
डकमा inoco क्लिक गर्दा अनुप्रयोग न्यूनतम सक्षम गर्नुहोस्
उबुन्टु डेस्कटपको बाँयामा डक छ। यस टास्कबारले चालु अनुप्रयोगहरूका बीच खोल्न, प्रबन्ध गर्न र स्विच गर्न सजिलो बनाउँदछ। यदि तपाईंलाई त्यो मन पर्छ अनुप्रयोगहरू न्यूनतम हुन्छन् जब उनीहरूको प्रतिमा डकमा क्लिक गर्दा, तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो प्रकार्य अक्षम छ। यसलाई सक्षम बनाउन, टर्मिनल खोल्नुहोस् र चलाउनुहोस्:
उबन्टुमा उपयोगी किबोर्ड शर्टकटहरू
त्यहाँ उबन्टुमा धेरै कुञ्जीपाटी सर्टकटहरू उपलब्ध छन्। तपाईले अनुप्रयोगमा अधिक कीबोर्ड शर्टकटहरू होल्डिंग गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ Ctrl + F1 कुञ्जीहरू। यसले उबंटु डेस्कटपमा किबोर्ड शर्टकटहरूको सूची प्रदर्शन गर्दछ।
लुकेका सेटिंग्स अनलक गर्नुहोस्
एक मात्र अनुप्रयोग जुन सधैं सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि स्थापना पछि स्थापना गर्न सिफारिस गरिन्छ '।ट्वीक्स'।
चिमहरू, नामले सुझाव दिन सक्छ, सेटिंग्स पाउन गाह्रो अनलक हुनेछ। यो उपयोगिताले कन्फिगरेसनहरूको धेरै विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ जुन हामीले मानक कन्फिगरेसन अनुप्रयोगमा फेला पार्नेछौं। हामी यसबाट स्थापना गर्न सक्षम हुनेछौं उबुन्टु सफ्टवेयर विकल्प.
ब्याट्री प्रतिशत देखाउनुहोस्
जब तपाईं ल्यापटप प्रयोग गर्नुहुन्छ, पूर्वनिर्धारित रूपमा उबन्टुले माथिल्लो पट्टीमा हामीलाई सूचित गर्न सानो ब्याट्री आइकन देखाउँदछ। यदि यो तपाइँको लागि धेरै सानो छ भने, तपाइँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ पाठ पठनको रूपमा ब्याट्री प्रतिशत प्रदर्शन गर्नुहोस्.
उबुन्टुमा ब्याट्री प्रतिशत देखाउन, हामीले भर्खर ट्वीक्स अनुप्रयोग खोल्नु पर्छ र जानुपर्नेछ शीर्ष बार> ब्याट्री प्रतिशत.
यदि तपाइँ कमान्ड लाइन प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं चलाउन सक्नुहुन्छ:
कन्फिगरेसन अनडू गर्न, फेरि उही आदेश चलाउनुहोस्, तर 'true' लाई 'गलत' को साथ बदल्नुहोस्.
रातको प्रकाश सेटिंग्स
उबुन्टुमा रातको प्रकाश विकल्प सक्षम गर्न, तपाईं जानु पर्छ सेटिंग्स> उपकरणहरू> मोनिटरहरू र "नाइट लाइट" पछाडि देखा पर्ने बक्स जाँच गर्नुहोस्।
हामी रातलाई उज्यालो बनाउन सक्छौं स्वचालित रूपमा सूर्यास्त र सूर्योदय बीचमा सक्रिय हुन्छ। हामी निजीकृत तालिका पनि कन्फिगर गर्न सक्छौं।
जिनोम विस्तारहरू पाउनुहोस्
जिनोम एक्सटेन्सनहरू सयौं सानो पावर अपहरू मार्फत उपलब्ध छन् जिनोम एक्सटेन्सन वेबसाइट। त्यहाँबाट हामी सक्छौं उबंटु १..१० डेस्कटपमा GNOME विस्तार स्थापना गर्नुहोस्.
जिनोम एक्सटेन्सन वेबसाइट यसले तपाइँलाई ब्राउजर एड-अन स्थापना गर्न सोध्नेछ जब तपाईं भ्रमण गर्नुहुन्छ, वा तपाईं निम्न लिंकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ:
क्रोम वेब ब्राउजर प्लगइन.
फायरफक्स वेब ब्राउजर प्लगइन.
हामीले होस्ट कनेक्टर पनि स्थापना गर्नुपर्नेछ। यसले तपाइँलाई तपाइँको डेस्कटप शेल मार्फत वेबसाइट संवाद गर्न अनुमति दिनेछ। छ बाट स्थापना गर्न उपलब्ध उबुन्टु सफ्टवेयर विकल्प.
स्न्याप अनुप्रयोगहरूमा स्टक अप
दु: खी हामीले प्रयोग गर्ने Gnu / लिनक्स वितरणको पर्वा बिना, अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूको लागि उनीहरूको सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताहरूमा ल्याउने यो तरिका हो।
स्न्याप्सले तेस्रो-पार्टी पीपीएमा भर पर्नु बिना लोकप्रिय अनुप्रयोगहरूको नयाँ संस्करण चलाउन सुरक्षित तरिका प्रदान गर्दछ। हामी सबै मार्फत नेभिगेट गर्न सक्षम हुनेछौं मा उपलब्ध अनुप्रयोगहरू आधिकारिक तस्वीर स्टोर वेब ब्राउजर प्रयोग गरी, वा उबुन्टु सफ्टवेयर विकल्प खोल्नुहोस् र हेर्नुहोस्।
ठाउँ खाली गर्न अप्ट क्यास खाली गर्नुहोस्
अनुप्रयोगहरू स्थापना पछि, हामी गर्न सक्दछौं एपीटी क्यास जाँच गर्नुहोस् यो कमाण्ड चलाउँदै:
यसको साइज थाहा पाएर हामी अब निम्न कमाण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्छौं खाली डिस्क खाली ठाउँ र खाली क्याप खाली गर्नुहोस्:
मैले यस लेखको सुरूमा लेखेझैं उबन्टु १..१० 'ब्रह्माण्डिक कटलफिस' स्थापना गर्दा हामीले लिन सक्ने यी केहि चरणहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » उबुन्टु १..१० ब्रह्माण्डिक कट्टलफिस, स्थापना पछि केहि चीजहरू
जब मैले प्रयोग गरेको छु:
gsettings org.gnome.shell.extensions.dash-to-Dock क्लिक एक्सन 'न्यूनतम' सेट गर्नुहोस्
यो मलाई देखा परेको छ:
bash: span: फाइल वा निर्देशिका अवस्थित छैन
Tetelx लाई जवाफ दिनुहोस्
जिनोम स्टोर विस्तारहरू / भण्डार नराम्ररी क्र्यास हुँदैछ
लगभग सबै मेरो लागि ठीक छ। पीसी खोल्दा समस्या छ स्क्रीन पर्दा कालो रहन्छ र त्यहाँ यो बन्द हुन्छ र हातले बन्द हुन्छ तर सुरू हुन समय लाग्छ। र उबुन्टु सफ्टवेयरमा समस्या छ। अरु सबै ठीकठाक हुन्छ
«... पीसी खोल्दा समस्या छ स्क्रीन पर्दा कालो रहन्छ र त्यहाँ बन्द हुन्छ", त्यो धेरै गम्भीर छ। पुन: स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, यदि समस्या अझै पनी जारी छ भने उबुन्टुको अर्को संस्करण स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुहोस् (यो बग्गी हुन सक्छ) कि यो ज्ञानेम शेल हो कि भनेर पत्ता लगाउन केहि फोरमहरूमा उनीहरूले समस्याहरू दिएका छन्, संस्करण 3.30०
यो टोली जीनोमको लागि पूर्ण शर्मको कुरा हो कि आधारभूत कार्यहरू जस्तै डकको ईनोकोमा अनुप्रयोगहरूलाई न्यूनतम पार्ने कार्य अझै पनी मैन्युअरी सक्षम हुनुपर्दछ। यो अपमानजनक छ। यसले केवल ती व्यक्तिहरूको अठोट र कट्टरपन देखाउँदछ जुन वर्तमानमा डेस्कटप वातावरणको जिम्मामा छन्। श्री मिगेल डे इजाजाले आलोचना गरेका थिए ... राम्रो कारणका साथ।
उबुन्टु र डेरिभेटिभमा टर्मिनलबाट उपलब्ध प्याकेजहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्